" အသည်းကျော်တူမလေးကို ခေါင်းအုံး Challenge လေးလုပ်ခိုင်းခဲ့တဲ့ သန္တာဗိုလ် " - Cele Connections
” အသည်းကျော်တူမလေးကို ခေါင်းအုံး Challenge လေးလုပ်ခိုင်းခဲ့တဲ့ သန္တာဗိုလ် “
CeleConnectionsပရိသတ်ကြီးရေ သန္တာဗိုလ်ကတော့ သူမရဲ့မိခင်ကြီး ဧပြီ( ၈ )ရက်နေ့မှာ ရုတ်တရက် ဆုံးပါးသွာခဲ့တာကြောင့် စိတ်ထိခိုက်မှုများစွာနဲ့ သူမလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာရဲ့ profile ကို ဝမ်းနည်းခြင်အထိမ်းအမှတ် အမဲရောင်ကို ယနေ့ထိထားထားဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သန္တာဗိုလ်ကတော့အမြဲ ပျော်ပျော်နေတတ်တဲ့ မင်းသမီးလေးဖြစ်ပေမယ့် အခုလိုအချိန်မှာတော့ သူမရင်ထဲပြောမပြတတ်အောင်ဝမ်းနည်းနေမှာအမှန်ပါပဲနော်။
သူမရဲ့ဝမ်းနည်းမှုကိုတွေ သူမရဲ့အသည်းကျော် တူ ၊ တူမလေးတွေဖြစ်တဲ့ ချောရတနာရဲ့ ရင်သွေးလေးတွေနဲ့ အချိန်ကုန်ဆုံးနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာလည်း ” ကိုယ်ကမရိုက်ချင်သေးတော့ တူမတော် CoCo ကို ကလိ…pose ကသင်စရာတောင်မလို ”ဆိုတဲ့စာလေးနဲ့ ချစ်စရာတူမလေးရဲ့ စတိုင်အပြည့်နဲ့ ပဲပေးနေတဲ့ ပုံရိပ်လေးနဲ့ challenge. လုပ်နေကြတဲ့အတိုင်း တူမလေးကို ပြင်ဆင်ပေးခဲ့တာပါ။
ချစ်စရာကောင်းတဲ့တူမလေးကြောင့် သန္တာဗိုလ်ကတော့ ဝမ်းနည်းမှုတွေအနည်းအများသက်သာနေမှာအမှန်ပါပဲနော်။ CeleConnectionsပရိသတ်ကြီးလည်း ချစ်စရာကောင်းတဲ့ သန္တာဗိုလ်ရဲ့အသည်းကျော်တူမလေးကိုချစ်ရင်မှတ်ချက်တစ်ခုခုပေးခဲ့ပါဦးနော်။
” အသညျးကြျောတူမလေးကို ခေါငျးအုံး Challenge လေးလုပျခိုငျးခဲ့တဲ့ သန်တာဗိုလျ ”
CeleConnectionsပရိသတျကွီးရေ သန်တာဗိုလျကတော့ သူမရဲ့မိခငျကွီး ဧပွီ( ၈ )ရကျနမှေ့ာ ရုတျတရကျ ဆုံးပါးသှာခဲ့တာကွောငျ့ စိတျထိခိုကျမှုမြားစှာနဲ့ သူမလူမှုကှနျရကျစာမကျြနှာရဲ့ profile ကို ဝမျးနညျးခွငျအထိမျးအမှတျ အမဲရောငျကို ယနထေိ့ထားထားဆဲ ဖွဈပါတယျ။ သန်တာဗိုလျကတော့အမွဲ ပြျောပြျောနတေတျတဲ့ မငျးသမီးလေးဖွဈပမေယျ့ အခုလိုအခြိနျမှာတော့ သူမရငျထဲပွောမပွတတျအောငျဝမျးနညျးနမှောအမှနျပါပဲနျော။
သူမရဲ့ဝမျးနညျးမှုကိုတှေ သူမရဲ့အသညျးကြျော တူ ၊ တူမလေးတှဖွေဈတဲ့ ခြောရတနာရဲ့ ရငျသှေးလေးတှနေဲ့ အခြိနျကုနျဆုံးနတောပဲ ဖွဈပါတယျ။ လကျရှိမှာလညျး ” ကိုယျကမရိုကျခငျြသေးတော့ တူမတျော CoCo ကို ကလိ…pose ကသငျစရာတောငျမလို ”ဆိုတဲ့စာလေးနဲ့ ခဈြစရာတူမလေးရဲ့ စတိုငျအပွညျ့နဲ့ ပဲပေးနတေဲ့ ပုံရိပျလေးနဲ့ challenge. လုပျနကွေတဲ့အတိုငျး တူမလေးကို ပွငျဆငျပေးခဲ့တာပါ။
ခဈြစရာကောငျးတဲ့တူမလေးကွောငျ့ သန်တာဗိုလျကတော့ ဝမျးနညျးမှုတှအေနညျးအမြားသကျသာနမှောအမှနျပါပဲနျော။ CeleConnectionsပရိသတျကွီးလညျး ခဈြစရာကောငျးတဲ့ သန်တာဗိုလျရဲ့အသညျးကြျောတူမလေးကိုခဈြရငျမှတျခကျြတဈခုခုပေးခဲ့ပါဦးနျော။
အထင်ကြီးစရာကောင်းလောက်အောင် ကိုရီးယားဘာသာစကားနဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် မိတ်ဆက်ခဲ့တဲ့ ဝိုင်းလေးရဲ့ ဗီဒီယို
ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးရှေ့က ယုန်လေးရဲ့ အင်တာဗျူးမှာ သူ့ရဲ့နာမည်ကို ထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့တဲ့အကြောင်းနဲ့ ပက်သတ်ပြီး ရှင်းလင်းပြောဆိုလာတဲ့ Russell
မမဆောင်းရဲ့ အချစ်နဲ့ဘဝကို စိတ်ကူးယဉ် အားကျပြီး ပရိသတ်တွေရယ်မောရစေဖို့ ဟာသအမြင်လေးနဲ့ ဗီဒီယိုလေးတင်ဆက်လာတဲ့ ကိုပေါက်